The Irrawaddy's Blog: သတိ ပျင်းတတ်သူများလည်း အောင်မြင်ခွင့်ရှိသည်(ဘ၀အောင်မြင်ရေးစာစု-၁၃)
သတိ ပျင်းတတ်သူများလည်း အောင်မြင်ခွင့်ရှိသည်(ဘ၀အောင်မြင်ရေးစာစု-၁၃)
ပျင်းတတ်တဲ့ တို့လူငယ်တို့ အတွက် အခုတပတ်မှာတော့ မျှော်လင့်ခြင်း၊ စိတ်ကူးခြင်းနဲ့ ယုံကြည်ခြင်းတွေ အကြောင်းဆက်ပြီးပြောပြပါဦးမယ်။
တကယ်တော့ မျှော်လင့်ချက် ဆိုတာလှပတဲ့ စကားလုံးပါ။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စကားလုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဒီစကားလုံးလေးကို သုံးစွဲဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀ကို ရဖို့ မျှော်လင့်တယ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ မျှော်လင့်တယ်၊ ထီပေါက်ပါစေလို့ မျှော်လင့်တယ် စသဖြင့်ပေါ့။
ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။ မျှော်လင့်တယ်ဆိုတာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကောင်းဘက်ကို ရည်ရွယ်တဲ့ စကားလုံးလေးပါ။ သို့ပေမယ့် မျှော်လင့်ရုံသက်သက်နဲ့ ပြီးမြောက်ပါရဲ့လား ဆိုတာပဲ။ မျှော်လင့်တယ်ဆိုတာလေးနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်လိုလားရာကို မရနိုင်ပေဘူးဆိုတာ သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ တဆင့် ထပ်မြှင့်ရရင် မျှော်လင့်တဲ့ အတိုင်း ဖြစ်လာပြီရလာပြီဆိုပြီးယုံကြည်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုနဲ့ အတူတွဲကပ်ပါလာတာက သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ။ ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ဖြစ်တည်ရရှိပြီဆိုရင် စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ၊ စိတ်လိုရာကိုယ်ဖြစ် ဆိုသလိုအောင်မြင်ပြီပေါ့။ အပျင်းပြေဖတ်ဖို့ အောက်မှာကဗျာလေးတပုဒ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Hope is suchabeautiful positive word...
I used this word daily throughout my life...
I hope I haveahappy life...
I hope I can lose weight...
I hope I can do this or that....
Well as positive as it is.... hope is not enough.
Lately, when I see this word... I want to scream..
I have found that hoping is not doing...
Hoping is thinking something outside yourself will make the change...or cause the wonderful things to happen.
Stop hoping and start believing...
Now there is an awesome word and believing is doing...
Believe means you see it ... you know it and you will take action..
If you believe something, then you think there isahigh degree of certainty that it is true. If you hope for something, then you understand there isagood chance that it will not happen. Hope includes some doubt, whereas plain belief does not. Hope has an element of uncertainty, whereas belief does not.
So stop hoping for success...hope means it may not happen
Believe that nothing can stop you...see it feel it and do it!!!!
Believing means it WILL happen!!!! Means you see yourself where you want to be...
I believe in you all......
These are words from my good friend Jackie!